एक अर्बभन्दा बढी वैदेशिक लगानी गर्नेलाई अति विशिष्टको परिचयपत्र – NepalajaMedia
नियमावलीले प्रतिबद्धता गरेपछि लगानी भित्र्याउनु सरु गर्ने समयसीमा पनि तोकि दिएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि अब विदेशी लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता गरेको एक वर्षभित्र लगानी भित्र्याउन सुरु गरिसक्नु पर्नेछ ।
Prevपूर्वजन्मका बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ त ? यस्तो छ शास्त्रीय मान्यता
Next‘ओइ सरकार सुन ! कान खोलेर सुन’
पढ्न भन्दै नेपाल आएर यस्तो गैरकानुनी काम गर्ने ३४२ जना विदेशीलाई देश निकाला !